ULAURA MVULA: 1 / F UVAVANYO LWE-ALBHAMU YE-EP - IINDABA
1 / f EP
Kwizithende zokutyikitywa okutsha, imvumi iphinda ihlangane nge-EP eneengoma ezine eziphinda zisebenze kwakhona kwiingoma ezikwi-albhamu yakhe yangaphambili, ngokudibanisa ubhetyebhetye beengoma zakhe zokuqala nobumvumi obunobukroti.
Iingoma ezilungileyo ze doo wop
Dlala iTrek Igadi eluhlaza -ULaura MvulaUkuhamba SoundCloud
U-Laura Mvula unesakhono sokuzoba kunye nokususa ii-moods ezithile kwingoma enye. On Ndenze Mhle, ukusuka kwi-2013 yakhe yokuqala Cula iNyanga , Utshintshana kakuhle phakathi kokuchasa (andinakukwenza ukuba undithande) kunye nokusebeza ngokungazithembi (Andifuni ukuba umhlaba uphulukane nomphefumlo wam). Ukulandela kwakhe ngo-2016, Igumbi Lokuphupha , yaqhubela phambili ngokucofa iLondon Symphony Orchestra ukugcwalisa imbonakalo yeemvakalelo zobunzima bayo kunye nolungelelwaniso lwamalungiselelo okuba nefuthe elimangalisayo. Uqeqesho lwakudala lukaMvula luyabonakala kwaye yeyona mpembelelo ilula yokucacisa, kodwa ngumbala nje omnye kwiphalethi ebandakanya ukuphinda-phinda ijezi, i-funk, iingoma zomphefumlo, kunye nobuchule bokuphindaphinda.
Ngeliphandle, umculo kaMvula yile nto imele ukuvakala ngathi: yinto engalindelekanga nevuselelayo yokudityaniswa kohlobo. Ngelixa impumelelo ephambili ihleli Iyadandathekisa ngaphandle kokufikelela kuye, uphawu lukaMvula kwihlabathi le-pop aluzange luqwalaselwe kwaye lumfumanele iqela labaxhasi abaphezulu, kubandakanya uJill Scott, uNile Rodgers, kunye neNkosana engasekhoyo. Ke xa uMvula wayekwa ngokungekho mthethweni kwileyibhile yakhe nge-imeyile ngo-2017, ngaphantsi konyaka emva kokukhutshwa kwecwecwe lakhe lesibini, kwakungekho buhlungu kuphela kodwa kuyamdida. Andizange ndiqonde. Ndandihlala ndixelelwa ukuba ndiyinxalenye exabisekileyo yoko u-Sony abekuko, watsho ngelo xesha. Ndandingumzobi owayezibeka emngciphekweni kwaye esenza izinto ezintsha nezintsha ngokunyanisekileyo — ndandizikholelwa.
Gcina izinto ezimbalwa zeendwendwe kunye nokungena kwifilimu yesandi, 1 / f kuphawula ukukhutshwa kokuqala kukaMvula kwiminyaka emihlanu ukusukela Igumbi Lokuphupha kunye nokuwa kwelebhile elandelayo. I-EP, eneengoma ezintathu ezihlaziyiweyo kwiingoma zakhe ezimbini ezidlulileyo kunye nekhava likaDiana Ross, iza emva kokutyikitywa kwakhe ngelebheli entsha. Akukho nto intsha kwi-EP, kodwa ngomsindo ibonisa ukunduluka kwemvumi. Iokhestra yeacoustic iye yatshintshelwa eye-elektroniki, igcwele izihlanganisi, izitshixo zombane, kunye nokubetha kwestaccato okukhumbuza zombini i-neon sheen ye-80s pop kunye neNkosana yexesha le-funk. Endaweni yokubeka ilokhwe entsha kwizinto zakhe ezindala, ukusebenza kwakhona kukaMvula kushenxise iziko leemvakalelo leengoma, ecofa kwisakhono esenza ukuba umsebenzi wakhe wangaphambili unyanzelise. Ukuba bhetyebhetye kweengoma zoqobo ezidityaniswa nobukrelekrele bemvumi kaMvula zibolekisa ngokumangalisayo kuseto lweengcinga ezithetha ngesikhundla sakhe sangoku njengomculi-ukuvala isahluko ngobomi obudlulileyo kunye nokungena kwikamva elithembisayo.
Culela iNyanga ithatha inkuthazo elinganisiweyo yentsusa kwaye uyijike ibe yinto eqaqambileyo nenamandla ngakumbi. Ukuba eyokuqala yatyibilika, olu guqulelo lubiza phambili ngomoya wokuzimisela. Ukugqitywa nge-loop efana ne-metronome, i-rework ikhupha i-melancholy ye-original kwaye iphinda iphinda ihambise iingoma ze-choral kwi-anthem yokuphakamisa. Igumbi Lokuphupha Ukhenketho lokunyanzelwa, Ndibonise Uthando, lwenza ukubuya okuphumeleleyo njenge-ode yokubhiyozela isithandwa sangaphambili. Imvelaphi yayihleli iqinile ngokukhawuleza kokulahleka-ukubongoza kunye nokuthandazela ukubuya kothando-kodwa le nguqulo iziva ihlangula. Ngombono onokubambeka woxabiso kwilizwi lakhe, uMvula uye washukuma ngaphaya kokuzila ukuze abonge okona kulungileyo kwixesha elidlulileyo phakathi kwecrescendo yee-synths ezinelanga. KwiGadi yeGreen, ilizwi elinemigangatho emininzi kunye neqhosha lesandla liyasuswa lilizwi likaMvula lilodwa kunye neslinky riffs. Isiphumo sihlaziyo sultry esikhomba ngokucacileyo kwisandi esitsha sikaMvula: sikhululekile, simnandi kakhulu, kwaye sinomdla. Apho igadi yoqobo yayizele bubumsulwa bobuntwana, lo ubambe imincili yesiqhamo esalelweyo.
Isigqubuthelo sika-Diana Ross sika-1970 e-UK esithi Ndisalindile yeyona ikufutshane i-EP ifika kumculo wangaphambili kaMvula kwaye inokulingana ngokulula nakweyiphi ye-albhamu yakhe yokugqibela. Ukuhanjiswa kwakhe okumnandi kumkhondo wokuvala kucoca amaxesha eMotown e-schmaltzy, kwaye akunzima ukucinga ukuba amazwi ajongana ngqo nokulwa kukaMvula nomzi mveliso womculo. UMvula uphatha ingoma yomoya ophuma kwi-naiveté yothando ukuya kuphoxeka ngokupheleleyo ngokuzola nangobabalo-ukujonga okokugqibela phezu kwegxalaba lakhe ngaphambi kokuhamba.
Kanye uYesu uyinkosi
icwecwe elimnyama solo albhamu
thot breaker oyintloko keef
florence phezulu njengethemba
denzel curry zuu iingoma